‘ဂျပန်က ကလေး များနဲ့ မြန်မာ ကလေးများရဲ့ကွာဟ ချက်များ’ – Kanaung
‘ဂျပန်က ကလေး များနဲ့ မြန်မာ ကလေးများရဲ့ကွာဟ ချက်များ’
Articles	‘ဂျပန်က ကလေး များနဲ့ မြန်မာ ကလေးများရဲ့ကွာဟ ချက်များ’	MaMa Lay
0	453 views	0Shares
3. ဂျပန်က မူကြိုကလေး တွေ အများသုံးအိမ်သာမှာ ကိုယ့် ဂျိုး ကိုယ် ထုတ်ပြီး ရှုးရှုးပန်းနေချိန်မှာ… မြန်မာက ကလေးတွေ ‘ရှူး ရှူး ‘ဆိုပြီး ဘောင်းဘီ မစိုအောင် သေးတည် နေရတယ်။
4. ဂျပန်က ကလေးတွေ ခြေခေါက် လဲ၊ စက်ဘီးလဲ တဲ့ အချိန်မှာ( မိဘက ရပ်ကြည့်နေပါတယ်…ကူပြီးမထူပါဘူး) ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထ ရပါတယ်။မြန်မာက ကလေးများ တစ်ခုခု ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ‘ဟဲ့သားလေး/ဟဲ့ သမီးလေး ‘ ဆိုပြီး အရင် သည်းသည်းလှုပ်ကြတယ်။
5. ဂျပန်က ကလေးတွေ ‘ဆရာမ အခုသင်တာ ကျွန်တော် ဘာမှ မသိဘူး …ပြန်ရှင်းပြပါ’ တောင်းဆို ရဲ တဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာက ကလေးများ …’ ‘ဟဲ့ ငါစာသင်တုန်းက ကောင်းကောင်း နားမထောင် ဘူး နောက်တခါ အဲ့လို အမေးမြန်းထူရင် အရိုက်ခံရမယ်’ ….ကြိမ်းမောင်းခံနေရတယ်…
6. မြန်မာ က ကလေးတွေ ….’ဟှောင့် ယီးလား လို့ ဆဲလိုက်စမ်း ‘ သင်ပေးနေချိန်မှာ ဂျပန်က ကလေးတွေကို ခါးကုန်း ဦးညွှတ်တာသင်ပေးနေကြတယ်။
7. မြန်မာက ကလေး တွေကို ပတ်ဝန်းကျင် က ချစ်လို့ဆိုပြီး ငိုအောင်၊ စိတ်မတို တိုအောင် စနေချိန်မှာ ဂျပန်က ကလေးတွေ ဂိမ်းတစ်ခုခု ပေး ဆော့ပြီး ‘မင်း လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဆိုတဲ့ စိတ်’ မွေးပေးနေကြတယ်။
8. မြန်မာ က ကလေးများ သားရေ…လမ်းထိပ်က ဆိုင်မှာ အရက်တစ်လုံး သွားဝယ်စမ်းကွာ….ခိုင်းတဲ့ အချိန်မှာ … ဂျပန်က ကလေးတွေ သဘာဝ ဘေး(ငလျှင်လှုပ်၊ မုန်တိုင်းတိုက်၊ ဆူနာမီ ) လာမယ့် အချိန်မှာ အစာ ရေစာနဲ့ ဆေးဝါး ဘယ်လိုရယူရမယ်၊ အသက်ဆက်ဖို့ ဘယ်လိုနည်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ကို သင်ပေးနေကြတယ်။
9. ‘သား ရေ… က စမ်းကွာ က က’ ဆိုပြီး ဆောင်းဘောက်စ်သံ အကျယ်ကြီးဖွင့်မြှောက်ပေးနေချိန်မှာ …ဂျပန်က ကလေးတွေ ‘ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆူညံခြင်းမပြုဖို့ ကိုယ့်ကြာင့်သူတပါး အနှောက်ယှက် မဖြစ်ဖို့ သင်ပေးနေကြတယ်။
10. မြန်မာက ကလေးတွေကို ‘ရန်ဖြစ်ရင် မင်းက အရင်ဦးအောင် လုပ်ခဲ့နော်…ခံလာရရင် မင့်ကို အရင် ရိုက်မှာ…ခံမလာရစေနဲ့ ‘ သင်ပေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဂျပန်က ကလေးတွေ ‘လူနဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လို သဟဇာတ ဖြစ်အောင် နေရမယ်၊ ဘယ်လို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမယ်’….ဆိုတာ သင်ယူနေကြရတယ်။
ကဲ…..ဘယ်သူတွေ ၊ ဘာများ လွဲနေကြသလဲ…..။
Credit to မင်းယျာ
Tags Article Knowledge
Previous Articleသင်္ဘောစေ့စားပေးခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ	Next Articleဘ၀အဖျားပိုင်းမှာ အေးချမ်းနိုင်ဖို့	Comments (0)
တရုတ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ခံစားချက် (၁)	14 hours ago
စိတ်အားထက်သန်ခြင်းသည် အောင်မြင်မှု၏ သော့ချက်	21 hours ago
အရည်ချင်းပြည့်ဝသူတယောက်ဖြစ်အောင်	21 hours ago
သွေးတိုး နဲ့ ရေချိုးခြင်း	21 hours ago
“နွား”ကိုချောက်ထဲတွန်းချပစ်ဖို့လိုအပ်နေသူများ	21 hours ago
အဆင်မပြေဘူးလား..ဖတ်ကြည့်ပါ	22 hours ago
အကြီးမားဆုံးသော အသိတရားများ	22 hours ago
ပြသနာတိုင်းမှာ(၂)ဘက် ရှိတယ်	22 hours ago